About Us – Somali Technology Solution
Waa Maxay SOMTS
somts waa hoyga barashada cilmiga computer ka oo ku baxaya habka online ka wana kii ugu horeeyay ee soo bandhigay Koorsooyin online ah oo Dhamaystiran, qiimo ku Qancinaya oo aad ku iibsan karto koorsooyinka ka baxa Barta Somali Technology Solution.
Waa kuma Somali Technology Solution
Somali Technology waa Hoyga tababarka Injireerada soomaaliyeed ee Mustaqbalka ee ka baro Aqoonta Kombuuyutarka Goob Kasta iyo Goor Kasta.
Somts waxay utaagan tahay sidii ay u xaqab tiri lahayd baahida bulshadu somaaliyeed u qabto Barashada Cilmiga Kombuyuutarka Qaybihiisa Kala Duwan. kuwaaso ku salaysan Manhajyada shirkadada kala ah CompTIA, Cisco, Microsoft, VMware iyo Adobe
SOMTS Baaqeedu waa Warabashada dadwaynaha, in labaa hiyo la balaadhiyaa, Balanteenu waa boqol kiiba boqol farsamada gacanta ee dhanka Aqoonta Computer ka , waxaana kaa dhowraynaa Theory aan dheef iyo dheecaan lahayn oo aan aaminsanahay in aan waxba lagu baran karin.
Faa'iida Barashata IT
IT waa lagama maarmaan barashada Cilmiga Computer, maxaa yeelay waxaa kutiirsan nolosha Qaybaheeda kala duwan. sidaad uga badbaadi la'hayd in laga xado Password ka iyo in laag Jabsado computer kaaga. waxana lagu heelaa shaqooyin lacag badan.